Akụkọ - A ga-ebutukwa ma budata ugboro ugboro ngbanwe ntụgharị skru air compressor?Kedu?
E jiri ya tụnyere ike ugboro ugboro, oriri gas nke ntụgharị ntụgharị ugboro ugboro na-agbanwe agbanwe, mmalite ahụ dị nro, na nrụgide na-enye gas ga-adịkwu mma ma e jiri ya tụnyere ike ugboro ugboro, ma mgbe ụfọdụ, ntụgharị ntụgharị ugboro ugboro, dị ka compressor ugboro ugboro. , ga-ebu ma budata ugboro ugboro.
Dịka nyocha nke ihe a si dị, a na-achọpụta na nbudata na nbudata ugboro ugboro na-emekarị n'ọnọdụ ndị a:
01. Ụkpụrụ setịpụrụ nke nrụgide na-enye ikuku na nrụgide nbudata dị nso
Mgbe compressor rutere n'ikuku ikuku, ma ọ bụrụ na ikuku ikuku na-ebelata na mberede na onye ntụgharị ugboro enweghị oge iji chịkwaa mbelata moto, mmepụta ikuku ga-adị oke ukwuu, na-ebute nbudata.
Usoro nke mmezi:
Tọọ ihe dị iche n'etiti ikuku ọkọnọ nrụgide na nrụgide ebutu ibu, na-abụkarị ihe dị iche bụ ≥ 0.05Mpa
02. Mgbe moto na-arụ ọrụ na ugboro ugboro, panel ahụ na-egosiputa mgbanwe nke nrụgide elu na ala.
Gbanwee ihe mmetụta nrụgide.
03. Ihe oriri gas nke onye ọrụ na-ejighị n'aka, nke ga-abawanye na mberede ma belata ọtụtụ oriri gas.
N'oge a, ikuku ọkọnọ ikuku ga-agbanwe.Ihe ntụgharị ugboro ugboro na-achịkwa moto ka ọ gbanwee ụda ikuku mmepụta iji nọgide na-enwe nkwụsi ike nke nrụgide ikuku.Otú ọ dị, mgbanwe ọsọ nke moto nwere ọsọ.Mgbe nke a na-agba na-enweghị ike ịnọgide na-enwe gas oriri mgbanwe ọsọ na gas oriri ọgwụgwụ, ọ ga-eme ka nrụgide mgbanwe nke igwe, na mgbe loading na ebutu nwere ike ime.
(1) Ndị ọrụ ekwesịghị iji ọtụtụ ngwaọrụ na-eri gas na mberede, ma nwee ike ịgbanye ngwaọrụ ndị na-eri gas n'otu n'otu.
(2) Mee ngwa ngwa ngbanwe ọsọ ọsọ nke ntụgharị ugboro ugboro iji mee ka mgbanwe ọsọ ọsọ nke mmepụta gas na-emepụta iji mee mgbanwe na mgbanwe nke oriri gas.
(3) Kushion nwere nnukwu ikike ikuku tank.
04. Oriri gas onye ọrụ pere mpe
N'ozuzu, ntụgharị ntụgharị ugboro ugboro nke compressor ugboro magnet na-adịgide adịgide bụ 30% ~ 100%, na nke asynchronous ugboro ntụgharị compressor bụ 50% ~ 100%.Mgbe oriri ikuku nke onye ọrụ bụ ihe na-erughị ala nke mmepụta ikuku nke compressor na ụda ikuku ruru nrụnye ikuku nke setịpụrụ, ihe ntụgharị ugboro ugboro ga-ejikwa moto iji belata ugboro ole na ole mmepụta ikuku nke ala dị ala. ugboro ole na-emepụta gas abịakọrọ.Otú ọ dị, n'ihi na oriri ikuku dị ntakịrị, ikuku na-enye ikuku ga-anọgide na-ebili ruo mgbe nrụgide nkwụsị na igwe na-ebupụ.Mgbe ahụ, ikuku na-enye ikuku na-adaba, na mgbe nrụgide na-adaba n'okpuru nrụgide ntinye, igwe na-ebugharị.
Mgbe a na-ebutu igwe nwere obere ihe oriri gas, compressor kwesịrị ịbanye n'ọnọdụ ụra, ma ọ bụ ogologo oge mgbe ebutuchara ya?
Mgbe a na-ebupụ igwe ahụ, njedebe oriri gas na-ejikwa gas, ma ozugbo compressor batara n'ọnọdụ ụra, compressor agaghịzi emepụta gas.N'oge a, ikuku ọkọnọ ikuku ga-ada.Mgbe ọ na-adaba na nrụgide ntinye, igwe ga-ebu ibu.A ga-enwe ọnọdụ ebe a, ya bụ, mgbe igwe na-amaliteghachi site na ọnọdụ ụra, nrụgide onye ọrụ ka na-ebelata, na ikuku ọkọnọ ikuku nwere ike ịdị ala karịa nrụgide loading, ma ọ bụ ọbụna dị nnọọ ala karịa nke loading. na-ebute nrụgide ikuku dị ala ma ọ bụ nnukwu mgbanwe nke ikuku ikuku.
Ya mere, a na-atụ aro na oge ịbanye n'ọnọdụ ụra mgbe ebutuchara ekwesịghị ịdị mkpụmkpụ.